Shillingford and Gayle put West Indies in command against Zimbabwe - The National
Shillingford and Gayle put West Indies in command against Zimbabwe
Shane Shillingford claimed five wickets as Zimbabwe were bowled out by the hosts for just 175 on the opening day of the second Test.
West Indies batsman Chris Gayle put on an unbeaten half-century in the first day against Zimbabwe.
A five-wicket haul from Shane Shillingford and an unbeaten half-century from Chris Gayle left the West Indies holding the upper hand following the opening day of the second Test against Zimbabwe.
Shillingford followed up his man of the match display in the first Test with five for 59 as Zimbabwe were bowled out for 175 just after tea after being sent in to bat at Windsor Park in Dominica.
However, Gayle and Samuels ensured that was no more than a blip as they batted the Windies to within 61 runs of Zimbabwe's total with eight wickets still in hand.